Lakulan – Nin maalin kasta shaqadiisa diyaarad ugu kicitima! | HimiloNetwork
Lakulan – Nin maalin kasta shaqadiisa diyaarad ugu kicitima!
Posted by: Zakariya in Wararka July 31, 2017	0 272 Views
Los Angeles (Himilonews) – Haddii aad kamid tahay dadka qaar oo aalaaba ka cawda socdaalka maalinleed ee shaqadiisa, sheekadan waxay ugu yaraan ku gelinaysaa xaalad degan. Nin ku nool Los Angeles kaas oo ka shaqeeya San Francisco ayaa lixda saacadood ee safarkiisa shaqada ku qaata duullimaad diyaarad.
Maalin walba, Curt von Badinski, oo ah injineer makaanik iyo isku dubba-ridaha shirkad tiknooloji oo xarunteedu tahay San Francisco, wuxuu kacaa aroor kasta – mayrasho iyo cunno kadib, wuxuu ku dhacaa gaarigiisa oo ilaa 15 daqiiqo ku geeya gegida diyaaradaha ee Bob Hope Burnbank, halkaas oo uu ka qaato diyaaraddiisa shaqsiga. Wuxuu 90 daqiiqo ku gaaraa Oakland oo ah magaalo 353 mile waqooyi-galbeed kaga beegan Los Angeles; kadibna wuxuu gaari geeya San Francisco ka raacaa halkaas.
Shaqada wuxuu galaa 8:30 subaxnimo ilaa laga gaaro 5:00 galabnimo kahor intuusan u kicitimin Los Angeles. Wuxuu aalaaba guriga kusoo laabtaa 21: 00 caways hore.
“Mar kasta oo aan u sheego dadka inaan San Francisco u kicitimo maalin kasta, waxay i weydiiyaan su’aashaa saddex jeer. Waxay igu dhahaan ‘Maalin kasta?’, Maalin kasta?’, Maalin kasta?” von Badinski ayaa u sheegay BBC Capital. “Waxay ku jaha-wareeraan xaqiiqda ah inaan maalin kasta u kicitimo shaqadayda.”
Shirkadda Curts waxaa lagu helay Los Angeles, hayeeshe waxay go’aansadeen inay u guuraan San Francisco waayo waa meel ka wacan qeyb ahaan. Waxaana jira sababo badan oo loogu garbin karo safarkiisa maalinle ee duullimaadka diyaaradda.
“Waxaan doonayaa inaan isku beego danta qoyska iyo tan shaqadayda oo aysan iska hor imaanin. Haddii taasi aysan ahayn mid aan ku suura-galin adeegsiga wax aan ka ahayn diyaarad, waa lama huraan inaan qaato,” ayuu yiri.
Von Badinski wuxuu ku bixiyaa $2,300 bishiiba duullimaadkiisa, waxaana tani soo raaca isku darka adeegyada kale ee diyaaraddu kaga baahan tahay sida baakinka garoonka, shidaalka iyo wixii lamid ah.
Waa safar uu ku raaxaysto duullimaadkeeda. In kasta oo ay jirto caqabado soo foodsaara, hadana marka loo eego sida ay lama huraan ugu tahay noloshiisa, wax walba waxay la noqdaan fudeyd.
Curt von Badinski ma ahan qofka kaliya ee dunida ku nool kaas oo maalinle ugu kicitima shaqadiisa. Sanadkii hore, Frantisek Hadrava, oo ah 46-jir ku nool Czech Republic ayaa kadib ku daalista socdaalka dhulka, wuxuu samaystay diyaaraddiisa gaarka ah. Wuxuu safarkiisa qaadan jiray 12-14 daqiiqo kusoo dhimay 4-5 daqiiqo.
Kala xiriir: farriin-danabeed; hiraal86@gmail.com
Previous: Cano Cristales – Webiga ‘Shanta Midab’ ama Qaanso-roobaad.
Next: Mushkiladda heysata Qoysaskeenna Yurub ku nool.
Aqoon is-weydaarsi ku saabsan doorka Warbaahinta ee horumarinta Cadaaladda
Marka Waalidku CAFIYO Dilaaga Wiilkooda!
Markuu Wajigu kaa qarsoomo!!
Nin si xeeladaysan iskaga furay xaaskiisa – iyada oo aan ogeyn!
Majirtaa madal ay u helaan gaadiidleydu canshuuraha ay sida maalin-laha ah u bixiyaan?